४८ हजार भाडा तिर्न ढिलाईले घरबेटी वाट सुन पसल कव्जा
सहमतिको उल्लंघन, पिडितले न्याय पाइनन्
प्रकाशित मिति : २० असार २०७७, शनिबार
वाँकेको कोहलपुरमा काठमाण्डौ सुनचाँदी पसल संचालन गर्दै आउनु भएकी चन्द्राकला सुनारको ४८ हजार घरभाडा तिर्न ढिलाईले घरबेटीले सुन चाँदी पसल कव्जा गरि तेस्रो व्यक्तिलाई वेचेका छन ।
साझा चोकको पूर्वपट्टि रहेको रमेश प्रसाद श्रेष्ठको घरमा लामो समय देखि चन्द्राकलाले काठमाण्डौ सुनचाँदी पसल संचालन गर्दै आउनु भएको थियो । प्रहरी तथा वडा कार्यलयलाई प्रभावमा पारी भाडा तिरीरहदा पनि पसल कव्जा गरि २०७६ सालको असार तिर तेस्रो व्यक्तिलाई वेचिएको पिडित चन्द्राकलाले वताउनु भएको छ ।
चन्द्राकलाले व्यवसायका क्रममा घरवेटिका आफन्त संग आफै केही सापटी क्रण लिएको भएपनि तिरिरहेको अवस्थामा पसल कव्जा गरी आफु माथि अन्याय गरिएको दुखेसो पोख्नु भयो ।
वेला वेला छलफल गर्दा पनि कुनै निश्कर्ष नआएपछि २०७७ सालको असार ४ गते उद्योग वाणीज्य संघको पहलमा पत्रकार, समाजसेवी व्यवसायीहरुको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो ।
सो छलफलले उद्योग वाणीज्य संघका अध्यक्ष चक्र व. अधिकारीको नेतृत्वमा ३ सदस्सीय पूर्नमुल्याङ्कन समिति वनाउने र त्यसको निर्णय दुवै पक्षले स्वीकार गर्ने सहमति पनि भयो । पूर्नमुल्याङ्कन समतिले न्युनतम दर रेट कायम गरी १० लाख ४ हजार ६ सयको मुल्याङ्कनको रिपोर्ट पनि दियो । तर त्यो सहमति घरवेटी रमेश श्रेष्ठले स्वीकार गर्न तयार हुनु भएको छैन । असार २० गते शनिवार वोलाईएको छलफलमा पनि घरवेटी आउन नमानेको उद्योग वाणीज्य संघका अध्यक्ष चक्र व. अधिकारीले जानकारी दिनु भएको छ ।
असार ४ गते भएको सहमति अनुसार घरवेटी श्रेष्ठले अरु संग भएको आर्थिक कारोवारेमा आफु माथि जोडेर हिसाव नगर्ने आफ्नो लिने कुरा मात्र हिसाव गर्ने भनि हस्ताक्षर पनि गर्नुृ भएको थियो । यस्तै घरवेटी श्रेष्ठले मुल्याङ्कन समितिको निश्कर्ष स्वीकार गर्न तयार हुनेछु आलटाल गरे कानुन अनुसार सहुला वुझाउला भनि समेत हस्ताक्षर गरेको भएपनि अहिले आलटाल गरी सहमतिको उल्लंघन गरेको व्यवसायीहरुको वुझाई छ । दुवै पक्षको सहमति अनुसार गठन गरिएको मुल्याङ्कन समितिको रिपोर्ट पनि घरवेटीले कार्यान्वय गर्न आनाकानी गर्दा न्याय नपाइने हो की भनि फेरी पनि पिडित चन्द्राकला चिन्तीत हुनु भएको छ ।
पिडित चन्द्राकलाले २०७५ कार्तिक महिना देखि २०७६ वैसाख महिना सम्मको ७ महिनााको भाडा १४ हजारका दरले ९८ हजार दिन वाँकी रहेको भएपनि २०७६ असार २३ मा भाडा स्वरुप ५० हजार भुक्तानी गरेकाले ४८ हजार मात्र तिर्न वाँकी रहेको वताउनु भएको छ । ५० हजार भाडा तिरेको २ दिन पछि असार २५ गते आफ्नो सुनचाँदी पसल तोडफोड गरि कव्जा गरि तेस्रो व्यक्तिलाई वेचिएको पिडीत चन्द्राकलाको भनाई छ ।
कानुन त ६ महिना सम्म वहालमा वस्ने मानिस घरधनी वाट सम्र्पक विहिन भएमा स्थानीय निकायमा घरधनीले निवेदन दिएपछि स्थानीय प्रसासनको रोहवरमा कोठाको ताला तोडने व्यवस्था छ । वहालमा वस्ने व्यक्ति सम्पर्कमा पुगेपछि घरधनीले भाडा लिइ वहालमा वस्ने मानिसको सामान फिर्ता दिनु पर्ने प्रावधान छ ।
तर चन्दाकला भने घरधनीको सम्पर्कमा हुदा हुदै २ दिन अघि ५० हजार भाडा दिएको समयमा पनि कोठाको ताला तोडी पसल कव्जा गरिएको छ । घरधनी श्रेष्ठले भने मुचुल्काको सामान नफिर्ता दिनु भएको छ नत सामानको मुल्याङ्कन गरेको पैसा पनि स्वीकार गर्नु भएको छ ।
पिडित चन्द्राकलाले घरवेटीको फुपु ,वहिनी संग आफै ऋण सापटी लिएको र तिरिरहेको वेला पनि घरवेटीले त्यही कुरा जोडेर पसल कव्जा गर्न खोज्नु दुखद भएको गुनासो गर्नु भयो ।
घरबेटी कि वहिनी विना श्रेष्ठ संग २०७६ साल माघ १० गते २ लाख रुपैया ऋण लिएकोमा रु ३ लाख ३६ हजार तिरिसकेको चन्द्राकलाले वताउनु भयो ।
त्यस्तै पिडित चन्द्राकलाले घरभेटीको फुपु संग २०७२ कार्तिक १० मा रु ७ लाख रुपैया क्रण लिएको भएपनि रु ६ लाख ४१ हजार रुपैया वुझाइ सकेको र केही तिर्न वाकी रहेको जानकारी दिनु भयो ।
यस्तै घरबेटीले मेरो भाई विजयलाई ५ लाख ऋmण दिएका रहिछन त्यो पनि म माथि जोडेर पसल कव्जा गर्न खोजिएको होकी भनि पिडीत चन्द्राकलाले प्रश्न गर्नु भयो ।
तर माथिका कुरा कुनै घरबेटी संग जोडिएको विषय होइन म सम्वन्धित मान्छेको लेनदेन तिरो तारो गरिरहेको थिए पसल कव्जा गरि वेचियो उहाँले भन्नु भयो । उहाँले आफुले पैसा तिर्दा तिर्दै यसरी अन्याय गरिनु अत्यन्त आपतीजन,व्यवहार भएको भन्दै न्यायका लागि माग गर्नु भयो ।
पिडित चन्द्राकलाले घरवेटीले पसलको खाता कव्जा गर्दा पसलको नाममा धरौटी राखिएको धेरै ग्राहकको सुन समेत लिलाम भएको छ यो कस्ले तिर्ने ? म अन्यायमा परे भन्नु भयो ।
पिडित चन्द्राकलाले मुल्याङ्कन समितिको मुल्याङ्कन रिपोर्ट कार्यान्वय गरी खाता कव्जा गरेदेखि लिलाम भएको सुनको मुल्य असुली सहित खाता फिर्ता गरिहोस भनि माग सहित लिखित सार्वजनिक अपिल गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा पनि निवेदन दिनु भएको छ । सरकारी निकाय वाट उचित न्याय पाउने नपाउने विषयमा अन्यौल भएको मध्य तथा सुदुर पश्चिम सुनचाँदी व्यवसायि संघका अध्यक्ष देविलाल सुनारको भनाई छ । उता घरधनी श्रेष्ठले भने मुल्याङ्कन रिपोर्ट वढी भएकाले स्वीकार नगरीएको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ कालिकोटको प्रथम भेला सुरु